Kiobà : Bilaogera voatsiratsira tamin’ny fanambaran’ny Arseveka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Mey 2012 10:20 GMT
Tahaka ny tsy mbola ampy tamin'ny arseveka ny nikosikosehana ireo bilaogera tamin’ny fitsidihana farany nataon'ny Papa farany teo tany Kiobà indrindra ny fangatahany hanaisotra ny mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny fiangonana ary ny tsy fitadiavany fiaraha-miasa amin’ny fanamorana ny fifampiresahana eo amin'ny papa sy ireo vondrona mpisintaka – nandritra ny fandraisam-pitenenana tao amin'ny Anjerimanontolon'i Harvard. Milaza ireo mpanao fihetsiketsehana am-piangonana ireo ho toy ny jiolahy ny kardinaly Ortega, izay mbola nampiakatra hatrany ny fahatezeran’ny Kiobana.
babalu niantso ny fivoasan-kevitra ho “maneso” sy “tsy misy dikany afa-tsy izay mandika lalàna”:
Ity fahotana farany manohitra an'Andriamanitra sy ny andian'ondriny ity no ohatra hafa amin’ny maha-tsi-mifaditrovana an'i Ortega. Soa ihany fa efa nanao izay hahatsinontsinona ny anto-pahotàn'i Ortega ary efa mitady ny fotoana Tompo Tsara
Nandrohy tamin'ny gazety mahazatra ahitana ny nitafatafana tamin'ny mpanao fihetsiketseha-panoherana ny bilaogy ary nandà ny filazana azy ireo ho maloto dosie. Tamin'ny lahatsoratra manaraka ny bilaogy nampanao fanangonan-tsonia haharetirety ny Kardinaly Ortega ary mandrisika ny mpamakiny hanao sonia:
Tokony handeha hisotro ronono ny eveka rehetra rehefa feno 75 taona, araka ny lalàna naorin’I Papa Joany Paoly faharoa. Teraka tamin’ny Oktobra 1936 ny Kardinaly Ortega, midika izany fa efa mety ny hanerena azy ho retirety, nefa, mbola mifikitra mafy amin’ny toerany anefa izy, ary mamela azy hanao izany koa ny Papa Ray masina.
Farany, ao amin'ny Translating Cuba , niaiky I Wendy Iriepa sy Ignacio Estrada fa “tsy manana teny ho enti-milaza ilay fanambarana vao aingana nataon’ny Kardinaly sady arsevekan’i Havana Jaime Lucas Ortega Alamino nandritra ny nipetrahany tao Etazonia tamin'ny herinandro”:
Na dia niteny niteny an-kahalalahana aza ny kardinaly kiobàna, nanaratsy endrika ny fitokisana ny ambaratongam-pahefana Katolika ao amin'ny nosy ny fiteny nampiasainy. Naverimberiny tanaty lahateniny ny fehezanteny fampiasan’ ny saranga mitondra.
Efa imbetsaka isika rehetra manaraka ny fivoaran'ny Fiangonana Katolika any Kiobà no nitaraina amin'ny lazaina ho fifandraisana ratsy eo amin’ny fiangonana sy ny fanjakana, sy ny firaisana tsikombakomban'ny Fiangonana amin'ny alalan'ny fahanginana momba ny zava-misy marina eo amin’ny firenena mifandraika amin'ny tsy fisian’ny karazan-jò sy ny tsy fahampian'ny toerana fivavahana an-kalalahana.
Tonga hatramin'ny filazan'izy ireo fa “misy itovitovizana amin’ny lahateny maro didian'ny departemantan'ny ideolojian’ny antoko komonista ao Kiobà” holazaina ny ankamaroan'ny fomba fitenin'ny Kardinaly:
Tsy mitady hitsikera ny anjara asan'ny fiangonana eto Kiobà ity resaka androany ity, fa manandrana hametraka amin’ny toerana tokony ho izy izay olona mampiasa ny fiangonana Katolika ho amin’ny tombontsoany manokana sady miaro ireo mandrendrika ny firenena ho amin'ny fahantrana lalina kokoa.
Te-hanontany ny Kardinaly Kiobàna tahaka izany izahay hoe, “ ahoana no ahazoany miditra mijery ny raki-tsoratra nataon'ny polisy amin'ny olona tsirairay efa nisahana ny Fiangonana Caridad ao Havana?” te-hanontany ihany koa izahay hoe, “ahoana no ahazoany vaovao fa niainga avy any Miami ny tsy fankatoavan-dalàna? Azoko tamin’io fotoana io, tahaka ny tamin’ny fotoana maro hafa, fa miteny mihoatra ny tokony holazainy ny Kardinaly, ka tokony hahazaka ireo fanakianana rehetra avy amin’ny ambaratonga samihafa koa izy ankehitriny.
Tsy noheveriko velively ny haheno ny teny, avy amin’ny vavan’ity mpitandrona ambony indrindra ao amin'ny fiangonana kiobàna, fanaratsiana ireo izay te hanandratra ny fanajana ny fahafahana fototry ny tsirairay. Miantso ireo izay manompo didim-pitsarana tsy marina ao anatin'ny toe-draharaha mampihoron-koditra tsy milaza ny olona mitovy aminy ho “mpandika lalàna” any amin’ny fihaonana iraisam-pirenena, mahatonga azy ho mpiray tsikombakomba amin’ny governemanta voakolikoly sy tsy mety mihontsina.
Hajiantsary nampiasaina amin'ity lahatsoratra ity, Catedral de San Cristóbal de La Habana, avy amin'i RC_Fotos, nampiasaina amin'ny alalana an Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Creative Commons license. Tsidiho ny Tahirintsarin'i RC ao amin'ny flickr